\_'कम्युनिस्ट विकास र समृद्धि विरोधी हुन्\_'
कात्तिक २६, २०७४| प्रकाशित १८:५५
विराटनगर– मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मोरङमा दलहरुले चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाएका छन्। ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङको क्षेत्र–६ चर्चाको केन्द्रमा छ।
मोरङ–६ मा प्रतिनिधिसभाका लागि नेपाली कांग्रेसका डा शेखर कोइराला र वाम गठबन्धनबाट एमालेका लालबाबु पण्डित चुनावी दौडमा छन्। दुवै नेता राष्ट्रियस्तरमा चर्चित भएकाले पनि मोरङ–६ को चुनावलाई निकै उत्सुकताका साथ हेरिएको छ। यस क्षेत्रमा बुढीगंगा गाउँपालिका, सुन्दर हरैँचा नगरपालिकाको वडा नम्बर २ देखि ७ र विराटनगर महानगरपालिकाको ४, ५, ६, ७, ९, ११ र १२ वडा पर्छन्। यहाँ कुल मतदाता संख्या १ लाख १० हजार ९ सय ४३ छ।
निर्वाचन प्रचारमा घरदैलो अभियान सुरु भइसकेको छ। यसै सेरोफेरोमा मोरङ–६ का कांग्रेस उम्मेदवार डा कोइरालासँग नेपाल लाइभका लागि अभयकुमार राईले गरेको कुराकानीः
प्रचार-प्रसारमा कत्तिको ब्यस्त हुनुहुन्छ?
घरदैलो कार्यक्रम बिहानबाटै सुरु छ। कार्यकर्ता भेटघाट र जनताको भावना बुझ्दैमा दिन बितेको छ।
घरदैलोका बेला के कुरामा जोड दिनुभएको छ, कस्ता वाचा गर्दै हुनुहुन्छ?
यस क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाका लागि ५ वर्षभित्र फुसको छाना भएको घरलाई जस्तापाताको घरमा रुपान्तरण गर्नेछौं । त्यसैगरी, बुढीगंगा गाउँपालिकालाई एक वर्षभित्र नगरपालिका र विराटनगरलाई प्रदेश–१ को राजधानी बनाउने हाम्रो ध्येय छ। हामी अन्यले के भने त्यसमा जान चाहँदैनौं, तर काम गर्ने सिलसिलामा यहाँको नदी कटानले पुर्याएको क्षतिलाई समाधानका लागि स्थायी तटबन्ध बनाउनेछौं। ती तटबन्ध निर्माण गर्दा उच्च जग्गामा भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासी परिवारलाई आवासको समेत व्यवस्था गर्नेछौं।
तपाईसँग एमालेका चर्चित नेता लालबाबु पण्डित प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मै जित्छु भन्नु भएको छ, चुनाव त रोचक होलाजस्तो नि?
म आफ्नो जितको दाबी गर्न सक्छु। अन्य उम्मेदवार के भन्नुहुन्छ, भिडन्त कस्तो हुन्छ, त्यसमा कुनै टीकाटिप्पणी गर्न चाहन्न। तर, लोकतन्त्र बचाउन कांग्रेसको जित अपरिहार्य छ।
जनताको कुरा सुन्ने, उनीहरुका पीडा बुझ्ने गरेको छु। कसरी उनीहरुलाई समृद्ध बनाउने त्यसका लागि म लागिपरेको छु। हामी कसले के भन्यो भन्दा पनि, हामीले जनतालाई के दिन सक्छौं भन्ने कुरामा केन्द्रित छु।
वाम गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धाका लागि विजयकुमार गच्छदार कांग्रेसमा फर्किएपछि, तपाईंको क्षेत्रमा कत्तिको फाइदा पुर्‍याउने देखिन्छ?
यो क्षेत्र कांग्रेसको गढ हो । अझ त्यसमा विजयजीहरु आउनु भएकाले त्यसले राम्रो सहयोग हुनेछ। यहाँ राप्रपा नेपाल, राप्रपा प्रजातान्त्रिकले समेत सहयोग गर्ने भएको छ। त्यसैले कांग्रेस यहाँ सशक्त स्थानमा छ।
दुई पटकका संविधानसभा निर्वाचनमा जीत हात पारे पनि तपाईंले जनताका काममा ध्यान दिनुभएन भन्ने गुनासो छ नि?
त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। काम भएका छन् तर चर्चामा ल्याउन आवश्यक ठानिनँ । यहाँ बाढीको समय जनताको घर–घर पुग्ने को थियो ? राहत वितरणसँगै स्वास्थ्य जाँचका लागि पुगेको छु। विभिन्न खोलाले गरेका कटानको कुरा बुझ्ने क्रममा स्थलमा पुगेको छु। महानगरभित्र सडक, ढल निकास, खानेपानीको बन्दोबस्तका लागि अरबौं रकम ल्याएको हो नि, हैन र?
वाम गठबन्धनपछि एमाले र माओवादीले अब वामपन्थीको सरकार बन्छ भनिरहेका छन्, यसमा के भन्नु हुन्छ?
कम्युनिस्ट विकास र समृद्धि विरोधी हुन्। त्यसमा कुनै शंका छैन । आज जसरी तपाईं–हामी बोलिरहेका छौं, त्यो अवस्था हुनेछैन। कम्युनिस्ट सत्तामा रहे उद्योग कलकारखाना बन्द हुनेछन्, रोजगारी गुम्नेछ।
होइन भने, अरुण तेस्रोको वाधक को थिए, विगत हेर्नुस्। अरुण तेस्रोको काम निरन्तर भएको भए जनताले लामो समय लोडसेडिङको भार खेप्नुपर्ने थिएन। तत्कालीन समय विश्व बैंकसम्म पत्राचार गरेर कम्युनिस्टहरुले अरुण तेस्रो रोकेकै हो।
त्यसैले पनि लोकतन्त्र बचाउन कांग्रेसको विकल्प छैन। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन कांग्रेस पूर्ण प्रतिबद्ध छ।